သဘာဝမြေ: ငြိမ်းချမ်းရေးကို တပ်မတော် လိုလားကြောင်း ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ပြော
ငြိမ်းချမ်းရေးကို တပ်မတော် လိုလားကြောင်း ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ပြော
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ကို အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က မြစ်ကြီးနားမြို့ မြို့တော်ခန်းမမှာကျင်းပတဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်တွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ မှာ တွေ့ရစဉ်
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှသာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်ဟာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ထပ်တူ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြောင်း ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မြို့တော်ခန်းမမှာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်တွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲမှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အပြည့်အဝရရှိမှု၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရရှိမှု၊ တစ်ဝက်ရရှိမှု ဒီလိုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လည်း အဲဒီပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအလိုက် ဒေသအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ ပညာရေးစနစ်၊ ကျန်းမာရေးစနစ် ကွာဟမှုတွေ ဒါတွေဟာ အနည်းနဲ့အများ ဖြစ်ပေါ်နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မှ တည်ငြိမ်မှသာလျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအားလုံး ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကချင်ပြည်နယ်သူ ကချင်ပြည်နယ် သားများနဲ့ ထပ်တူပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားပါတယ်"
ဒါ့အပြင် လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာကျင်းပမယ့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာ နှစ်နှစ်နီးပါး ကြိုးစားခဲ့ရတယ်လို့လည်း ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ ကွန်ပျူတာ အစုံ ၂၀၀ နဲ့ ဗလာစာအုပ် ဒါဇင်တစ်ထောင် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ စုစုပေါင်း တစ်ထောင်ဝန်းကျင် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Tabarwa Null at 5:51 PM
Labels: တပ်မတော်သတင်း, ငြိမ်းချမ်းရေး, သတင်း
ကျင်းဝမ်းနှင့် တူ/ မတူ
Email များပေးပို့လိုပါက tabarwanull@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မကွေး သတင်း (5)
သရော်စာဆောင်းပါး၊ ဟာသ (13)
မြန်မာ AA သူပုန်​နဲ့ ​ဘ​င်္ဂ​လား​ဒေ့​ရှ် ​နယ်​စပ်​မှာ ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်
ဘ​င်္ဂ​လား​ဒေ့​ရှ် ​နယ်​ခြား​စောင့်​တပ်​ဖွဲ့​များ ​ဘ​င်္ဂ​လား​ဒေ့​ရှ် ​နဲ့ ​မြန်​မာ ​နိုင်​ငံ ​နယ်​စပ်​မှာ ​ရ​ခိုင်​သူ​ပုန်​တွေ​နဲ့ ​ဘ​င်္ဂ​...
ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အတူရိုက်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ ထွက်ပေါ်လာ
မိုက်ကယ်အဲရစ် နှင့် ရရှိထား သားဖြစ်သူ ကင်မ်အဲရစ်ထံသို့ ၂ ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ သမီး ဟု ဝန်ခံထားသူ ခင်ရွှန်းလဲ့...
အသက် ၁၄ နှစ်နဲ့ မင်းသမီးဖြစ်လာသူ ငွေမှုံရတီ
သရုပ်ဆောင် ငွေမှုံရတီ(ဓာတ်ပုံ - ယုမွန်ကျော် / The Irrawaddy) သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ရွှေမှုံရတီရဲ့ ညီမငယ် ငွေမှုံရတီကလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို လု...
Source: From MWD Blog facebook Sexy ဆန်ဆန် ဒီဇိုင်းများ ၀တ်ဆင်လေ့ရှိသော အေးမြတ်သူက ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အသက်အရွယ်အရ တည်ငြိမ်သည့်ဘ...
source: 7days news နေထီးဆောင်းသည်ဟု လူအချို့ယုံကြည်သောဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − ဇော်မင်းထိုက်) ...
source: facebook Htoo Wai "အဆွေတို့ အနေနဲ့မိတ်ဆွေလို လာလည်ရင် ကျွုန်ပ် တို့ စခန်းကို ကျွန်ပ် ကိုယ်တိုင် လိုက်လည်လှည့်ပတ်ပြသပါမည်။...
source: facebook ထိပ် တင် တုန် အကျယ်အ၀န်း ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၄၃၉၉၈ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေ တယ်။ ...
ချစ်သူ အတွက် စွန့် စားရင်း သေဒဏ်ကျခဲ့သူ
၁၉၉၁ ခုနှစ် တွင် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရ ပထဆုံး သေဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့ အသက် အငယ်ဆုံး Tao Jing,(၂၀နှစ်) သောင်ကျင်း မှာ ယူနမ်ပြည်နယ်သူဖြစ်ပြီ...
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မရှိကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသား သမိုင်းပညာရှင် (Dr, Jacques Leider) ပြော ။
ရခိုင်၏သမိုင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာအသေးစိတ် သုတေသနပြုကာလေ့လာခဲ့သူ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား သမိုင်းပညာရှင် Dr,Jacques Leider မှဆက်လက်ပြော...
တောင်ကုတ်မှ ရခိုင်များကို အလွန်မုန်းတီးကြောင်း ဇာဂနာ ပြောဆို
ရိုဟင်ဂျာ (၁၀) ဦး ကို သတ်ဖြတ်သည့် တောင်ကုတ်မှ ရခိုင် များကို အလွန်းမုန်းတီးကြောင်း ပြည်သူချစ်တဲ့ လူရွှင်တော် ဦး ဇာဂနာက ဂါဒီယန်း သတင်းစာကိုြေ...
သဘာဝ. Simple theme. Powered by Blogger.